सिके राउतको कर्तुत बाहिरियो, यतिसम्म गरेका रहेछन् ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशसिके राउतको कर्तुत बाहिरियो, यतिसम्म गरेका रहेछन् !
सिके राउतको कर्तुत बाहिरियो, यतिसम्म गरेका रहेछन् !
काठमाडौं । जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले कानुन हातमा लिएको समाचार भाइरल बन्यो । धेरैले जनमत पार्टीको पक्षमा आफूलाई उभ्याए । केहीले भने कानुन हातमा लिएको भन्दैं आक्रोश पोखे । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सिके राउतको घर जाने सडक कालो पत्रे नगरेको रिसमा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको खुलासा भएको छ ।
कार्यालय बिहीबार दिउँसो १२ बजे संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरका निमित प्रमुख राजेश कुशवाह आफ्नो सरुवा अर्घाखँची भइसकेकाले बिदाइको तयारी गर्दै थिए ।
‘यहाँहरुको सहयोग र साथले नै तीन वर्षदेखि जनकपुरमा बसेर काम गर्न पाएँ । यहाँहरुको सहयोग र साथ मेरो जीवनमा स्मरणीय रहनेछ,’ कुशवाह भन्दै थिए । तर, त्यहीबेला सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता कार्यालयमा प्रवेश गरी हुलहुज्जत गरे । कार्यालयको तलै कोठादेखि तोडफोड गर्दै माथि पुगेका सयौँ कार्यकर्ताले लाठी, चिर्पट बोकेका थिए ।
उनीहरुले सरकारी पोसाकमा रहेका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्दै टेबल, कुर्सी तथा दराजहरु तोडफोड गर्न थाले केही कर्मचारीलाई कठालो समातेर माथिबाट तल झारे । डे्रसमा रहेका कर्मचारी मनोज अधिकारी, मनसुदन साह, कृष्ण चौधरी, रामउचित साह र महेश यादवलाई कुटपिट गरे । ‘मैले के अपराध गरेको छु, किन मलाई ष्सरी कुट्नुहुन्छ रु कृपया यसो नगर्नुस्’ भन्दै कुशवाह रोइकराइ गरे । उनीहरुसँग बिन्ती गरिरहे ।
तर, गुन्डा र आतंकी शैलीमा आएका जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले कुरा सुनेन् । बरु उल्टै कुशवाहले लगाएको टिर्सट च्यातिदिए । कार्यलयपरिसर बाहिर ल्याएर कपडा फुकाल्न लगाई उनको जिउभरि हिलो र पानी हाल्दै घिसारेर प्रदेश सरकारको कार्यालयअगाडि सडकसम्म ल्याए ।
Previous articleफेवा किनारबाट आह्वानः थोत्रो थिति फालौं, नयाँ थालौं
Next articleथाइल्यान्डमा रहेकी पूर्वयुवराज पारसकी छोरी पूर्णिका २० बर्षमा नै ३ बालबालिकाको अभिभावक बनिन् !